Ululele isandla abafundi abahlwempu usomabhizinisi | News24
LAST UPDATED: 2019-02-18, 05:32
Ululele isandla abafundi abahlwempu usomabhizinisi
PHOTO: nokuthula khanyile Kube wumzuzu wenjabulo kubafundi abanikelelwe ngomfaniswano wesikole usomabhizinisi wakwaMpumuza, uVusimuzi Sibiya.
YENZE okwehlukile injinga kasomabhizinisi wakwaMpumuza ngosuku lwezithandani njengoba inikelele abafundi abahlwempu ngomfaniswano wesikole.
UMnuz Vusimuzi Sibiya, we-Sibiya Funeral Services, usabalalise uthando ngokunikelela abafundi abangu 100 bezikole zakulendawo eziyisishiyagalombili ngomfaniswano wesikole.
Losomabhizinisi uthe wenza lokhu njengendlela yokubonga ubukhosi bakwaZondi ngokumsingatha ngesikhathi eshonelwa abazali esenza ibanga lokuqala.
“Ngonyaka ka 1978 ngazithuka sengisele ngedwa ekhaya, amathuna esegcwele insimi abazali bobabili sebeshonile. Ngathi uma ngithathwa izinduna zingisa enkosini uZondi yafike yakhuluma isibusiso phezu kwempilo yami yangitshela ukuthi ngiyoba umholi ngelinye ilanga. Ukunikelela kwami lezikole yindlela engizobonga ngayo kundabezitha ngoba nginjena nje kungenxa yesibusiso asikhuluma phezu kwempilo yami,” kusho losomabhizinisi.
USibiya uthe ngokusebenzisana nenhlangano yamatekisi i-South African National Taxi Council (Santaco) ube esesika iphethini njengoba minyaka yonke iba nohlelo lokunikelela abafundi ngomfaniswano wesikole.
“Ngathi uma ngiqala ukusebenza neSantaco ngawuthanda umsebenzi wabo wokunikelela umphakathi. Benginaso isifiso sokuthi ngenzele undabezitha okuhle kodwa ngingazi ukuthi kungaba yini. Ukunikelela abafundi abahlwempu ngibone kuyiyonandlela engingabonga ngayo kumaMpumuza ngokungisingatha kade ngisabhekene nobunzima.”
Losomabhizinisi uthembise ukuthi loluhlelo lokunikelela abafundi sekuzoba yinto azozibophezela ukuyenza minyaka yonke.
Inkosi uNsikayezwe Zondi isincomile isenzo sikaSibiya yabe isikhuthaza nabanye osomabhizinisi ukuthi nabo basilule isandla ukusiza abahlwempu.
“USibiya wenze into enhle ngokuphindisa kubantu asebenza nabo. Umphakathi wethu uhlwempu, lokhu akwenzile kuzogqugquzela ukuthi nabafundi abampofu bangazenyezi uma bephakathi kwezinye izingane. Uma izingane zifake umfaniswano odabukile, zihlekwa ezinye futhi zigcine zizenyeza sezinqena nokuya esikoleni. Ngalomnikelo uSibiya uzoqeda lokhu, kufanele sibadumise abantu abanjengaye ngokulula isandla emphakathini.”
USihlalo wo-Mgungundlovu Regional Taxi Council uMnuz Bheki Sokhela naye obehambele lomcimbi ugqugquzele ukuthi osomabhizinisi asebephumelele bangayikhohlwa imvelaphi yabo.
“Kufanele sihlale sibakhumbula labo abasenesifo sokuphumelela nabo empilweni singakhohlwa ukubalulela isandla. Nginxusa bonke osomabhizinisi ukuthi bazame ukuthuthukisa imiphakathi abavela kuyo.”
Leliphephandaba lithole ukuthi uSibiya ubesanda kunikelela isikole samabanga aphezulu e-Sweetwaters iMashaka Combined School ngama-laptop angu 45.